सेञ्चुरी बैकको ग्राहक सेवा प्रमुख लक्ष्य : क्षेत्रीय प्रबन्धक दुवाडी – Saurahaonline.com
सेञ्चुरी बैकको ग्राहक सेवा प्रमुख लक्ष्य : क्षेत्रीय प्रबन्धक दुवाडी
झण्डै अढाई दशक अघि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए पछि नेपालमा द्रुत गतिमा विकास भएको क्षेत्र हो बैंकिङ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको सेवाबाट असन्तुष्ट भएका ग्राहकहरुको लागि कुनै विकल्प नभएको बेला निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीमा बैंकहरु खुल्न थाले पछि यो क्षेत्रको विस्तार मात्र भएन सेवामा पनि निकै सुधार आएको छ । कुनै बेला राजधानी र सुगम स्थानमा मात्र बैंकहरु केन्द्रित रहने गरेकोमा अहिले गाउँ गाउँमा बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ । बैकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले ग्राहकले छिटो तथा गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् । बैकिङ क्षेत्रको विकाससँगै यस क्षेत्रलाई आफ्नो भविष्यको रुपमा अगाडि बढाउने दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन हुन थालि सकेको छ । यस्ता दक्ष जनशक्ति राजधानी केन्द्रित भै राखेको बेला सेन्चुरी कर्मसियल बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक गोर्कण दुवाडी भने राजधानी बाहिर बसेरै आफ्नो पेशा अगाडि बढाएका छन् ।
उनको लक्ष्य बैकिङ क्षेत्रमा नै योगदान दिने छ । उनको बिश्लेषणमा यो क्षेत्रपनि लाखौं युवाहरुको आर्कषण को केन्द्रबिन्दु हो। यसक्षेत्रबाट पनि देशलाइ योगदान दिन सकिन्छ।
बिगत २४ बर्षदेखिनै उनले यस क्षेत्रलाइनै कर्मथलो बनाउदै आएका छन। उनी भन्छन ‘म सानो छंँदा आफन्तको साथ जब रत्ननगरको एउटा बैकमा जाने अवसर मिल्यो त्यहांँका अफिस , वातावरण तथा कर्मचारीको आर्कषक पोशाक देखेर म प्रभावित भएंँ ,। उनले थपे ‘म त्यही दिनदेखिनै म ठुलो बैंकरर्स बन्ने सपना बनार्एंँ। , जो आज पुरा भएकोमा म एकदम खुशी छु’
२३ बर्ष अघि काठमाडौको नेपाल इण्डोस्वेज बैकमा क्यासियरको रुपमा रहेका बिभिन्न जिल्लामा शाखा प्रबन्धक हुदै एक बर्ष अघिमात्रै सेञ्चुरी कर्मसियल बैक, नारायणगढमा क्षेत्रीय प्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका हुन् ।
मिलनसार , इमान्दार र कामप्रतिको लगावका कारणपनि अरु बैकर्सका लागि पनि उदाहरणीय छन् । बिहानै ९ बजे अफिस आइसक्ने र चाडोमा बेलुका ७ बजे घर फर्किने उनको दैनिकी नै हो।
प्रायः आफ्नो कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको सेवा छिटो गराउने र कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनमै उनको अधिकांश समय वित्छ । साथै, क्षेत्रीय प्रवन्धकको जिम्मेबारीले होला उनलाई पश्चिमका केही जिल्ला र पुर्वका जिल्लाबाट पनि कार्यलयको फोनमै ,निर्देशनमै आफुलाई अभ्यस्त राख्छन। त्यसैले त उनी भन्छन ‘यो बैकिड. क्षेत्र एकदम चुनौतिको पेशा हो , यो क्षेत्र जति चुनौति र जोखिम छ त्यतिकै अबसर पनि छ’।
आफ्नो यति लामो बैकिड. यात्रासम्म आइपुग्दा उनी शाखा प्रबन्धक भएर देशका पुर्व पश्चिमका अधिकांश ठाउंँमा आफुलाइ स्थापित गराइसकेका छन। उनले सेञ्चुरी बैकमा क्षेत्रीय प्रबन्धकको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै सेञ्चुरी बैकलाइ आफ्नो अनुभव र लगनशीलता,दक्षता अनुरुप प्रतिस्पर्धामा लैजान तल्लीन छन। उनी बिगत सम्झदै भन्छन ‘जब यो बैंकमा छिरे तब मैले भुकम्प र नाकाबन्दीको चरम मार खेप्नु पर्यो, तरपनि ‘म हतोत्साही भईन मैले समस्यासंग जुद्दै ४ महिनाको समयमै प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सफल भएंँ’। उनी सुनाउंँछन त्यसपछि केन्द्रले दिएको लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशतले उनले काम अगाडी बढाउन सफल भए। ‘यो सबै मेरो अनुभव र सेवाग्राहीको म प्रतिको बिश्वास हो’। उनी गर्वका साथ बोले।
उनले बैंकलाइ अगाडी बढाउन यति मात्रै सफलतामा थकाइ मारेनन ,उनले बिभिन्न व्यक्ति ,संघसंस्था लगायत उद्योगी, व्यापारीसंँग सम्पर्क बढाउदै गए, उनी जो कोही भेट्छन आफ्नो बैकिङ स्खीमबारे सुनाइहाल्छन। त्यसैले उनले भने ‘यति छोटो समयमै मैले ३५ करोड बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसेकको छु। र ८ अर्ब चुक्ता पुंँजी पुर्याउन सक्षम भएको छु रु ९ वटा खराब ऋणीलाइ पनि पाखा लगाएको छ’ु।उनले आफ्नो कार्यप्रगति यसरी सुनाएं।
पुर्वी चितवनको खैरहनीमा सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिएका उनको बिगत खासै सन्तोषप्रद छैन। उनी स्थानीय कर्मस कयाम्पसमा आइ.कम पास गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौ तिर लागे । पढ्दै गर्ने क्रममा उनले त्यतिबेला काम गर्ने र अध्ययनलाई अगाडी बढाउदै लाने सोचे, बैकिङ क्षेत्रमा काम खोज्दै गए भाग्यबश उनले दरबार मार्ग को साबिकको इन्भेष्टमेन्टमा क्यासियरको काम पाए। त्यहांँबाटनै उनको बैकिड. यात्रा शुरु भयो ।
मैले काम गर्दै पढाइको रफ्तारलाइ पनि अगाडी बढाएंँ र बी.कम पनि पास गरें’। उनी भन्दै गए । उनले बैकमा आफ्नो कामलाइ अभ्यस्त पार्न बिहान ७ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म आफुलाइ खटाए। ‘ तर यति समय खट्दा पनि मैले चलि आएको तलव बाहेका अरु थप रकमको आशा गरिन किनकी मैले आफुलाइ प्रमोसन गराउनु थियो, ’। उनको बैकिङ क्यारियर उनले सुनाए ।
यसको साथै उनले आफ्नो एम.बी.ए अध्ययनलाइ पनि अगाडी बढाउनु थियो। तर समस्या थियो। समयको अभाव त्यतिबेला उनको एउटै बिकल्प रह्यो डिस्टेन्स लर्निङको बाटो। अनि दिल्लीको राय युनिभिर्सिटीमा भर्ना गरे । यहीं बाट अनलाइन अध्ययन गरी एम.बी.ए. पुरा गरे।
बैकिङ सेवामा देशको बिभिन्न भागमा पुगेका उनी अहिले नारायणगढको शाखा कार्यालयमा कार्यरत छन। उनले यहांँपनि बैकलाइ प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको लागि नयांँ स्किम साथ अगाडी बढिरहेका छन । हाल उनको र्बैंकमा बिपन्न बर्गलाई लक्षित गरी रु ५ मा खाता खोल्ने, जसको बिशेषतामा फ्र्रि अनलाइन बैकिङ, रु.३५० मा भिसा कार्ड, र २ लाख निक्षेपमा बीमा नीति ल्याएका छन। साथै बैंकले होम लोनमा समेत ७.५ प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले त उनी भन्छन हाम्रो बैंकले १० करोड देखि १ अर्बसम्म एउटै व्यक्ति र उद्योगलाइ लगानी गर्न सक्षम भएको छ। उनले आफ्नो बैकीङ स्कीम बारे बताए।
आफ्नो बैकको राम्रो नीति, सेवाग्राहीमुखी तथा छिटो सेवा दिएका कारण ३१ वटा शाखा बाट बिस्तार गरी छिटैनै बुटवलमा अर्को इनोभेटिभ विकास बैंक र सेञ्चुरीबैकसंँग चाडैनै गाभिने बताए।